Hurumende Inoti Iri Kuongorora Makambani ekuChina
Amai Mpariwa-Gwanyanya vanoti komiti yakaumbwa nehurumende iri kushanyira makambani nemigodhi yezvizvarwa zvekuChina ichiunganidza humbowo
Gurukota rezvemabasa nevashandi, Amai Paurina Mpariwa-Gwanyanya, vanoti chikwata chakaumbwa nehurumende gore rapera kuti chiongorore zvinyunyuto zviri kubva muvashandi vari kushandira makambani ekuChina ari munyika, chakatotanga basa racho kare.
Amai Mpariwa-Gwanyanya vanoti chikwata chakaumbwa nehurumende ichi chiri kushanyira makambani nemigodhi yezvizvarwa zvekuChina chichiunganidza nyaya dzekushungurudzwa kwevashandi.
Kumhemberero dzezuva revashandi dzakaitwa neChipiri, chimwe chikwata cheZCTU chinotungamirirwa naVaLovemore Matombo, chakapomera hurumende mhosva yekuita seisiri kuona kutyorwa kwekodzero dzevashandi nevashandirwi vekuChina.
Makambani aya ari kupomerwa mhosva yekushandisa vanhu kwenguva yakapfurikidza asi vasingavabhadhare mari, kurova vashandi, kusavapa mbatya dzakakodzera dzekushandisa nezvimwe zvinyunyuto zvakawanda zvinosanganisira kurambidzwa kwevashandi kuumba masangano anovamirira pamabasa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanotiwo havaoni hurumende iine zvikuru zvaichaita nezvichabuda mungororo iri kuitwa iyi.